Sammuu kee qori - Hiibboo 3 - BBC News Afaan Oromoo
Sammuu kee qori - Hiibboo 3
Hibboo keenya har'aa kana akka yaaltaniif isin affeerra.
Ga'eessoonni lamaa fi ijoolleen lama laga ce'uu barbaadan. Kanaafis bidiruu hojjetatan. Bidiruun isaanii garuu si'a tokkotti, ulfaatina hamma ga'eessa tokkoo yookin ijoollee lamaa qofa baachuu dandeessi.
Namoota afranuu laga kana ceesisuuf, si'a xiqqaan bidiruun kun lagicha itti qaxxaamuruu qabdu meeqa?
Deebii isaa argachuuf gara gadii ilaali
Sa'aatii xiqqaan bidiruun lagicha itti qaxxaamuruu qabdu, si'a 9. Tarii ati bifa addaan furte ta'a, ibsi isaa akka armaan gadiiti. (Dursa namoonni afranuu gamana akka jiraniifi gama sanatti ce'uu akka barbaadanitti haa yaadnu.)
Yoo ga'eessi tokko qofaa isaa lagicha qaxxaamure, namni bidiruu sana gamanatti as deebisu jiraachuun dirqama, yoo ga'eessichi ofumaa deebise, tola joore jechuudha. Kanaaf, jalqaba ijoollee lamaantu gamatti ce'a. Tokko achuma yoo turu, inni kaan bidiruu fidee as deebi'a. (Si'a lama qaxxaamuran jechuu dha.)
Qaxxaamura sadaffaa irratti ga'eessi tokko gamatti yoo ce'u, afraffaa irratti ijoollee lamaan keessaa kan gamatti hafe bidiruu fidee as deebi'a. Kana jechuun qaxxaamurawwan 4 booda ga'eessi tokko gamatti ce'uu danda'e jechuu dha.
Bifa wal fakkaatuun yoo irra deebi'an - qaxxaamurawwan biroo afur. Walumaa galatti qaxxaamurawwan saddeetiin booda, ga'eessa lammaffaa gamatti ceesisuu danda'u jechuudha. Isa saglaffaatiin ijoolleen lamaan ofii isaaniitii gamatti ce'u.